Bayivale ngezinga eliphezulu inyanga yabesifazane – Isambane News
Home > Featured > Bayivale ngezinga eliphezulu inyanga yabesifazane
Bayivale ngezinga eliphezulu inyanga yabesifazane
October 11, 2018 Isambane News
Bayivale ngezinga eliphezulu inyanga yabesifazane abasebenzi besifazane baseMajuba TVET College ngenkathi bebungaza inyanga yabo. Lomcimbi ububanjelwe eBlue Ridge Farm ngomhlaka- 31 kuNcwaba (August) lapho bonke abesifazane baleliKolishi behlangane khona ukuzobungaza lolusuku bakhulisane.
Inyanga kaNcwaba (August) eNingizimu Afrika inyanga yokubungaza abesifazane abangu- 20 000 abamashela emahovisi e-Union Buildings, ePitoli ukuyokhalaza ngokuphathwa kwamaPasi ayevimbela abantu abamnyama baseNingizimu Afrika ukuba bahambe ngokukhululeka ezweni labo. Umbungazo walonyaka uvumelana neminyaka eyikhulu yokubungaza iminyaka yeqhawe lomzabalazo uBaba Nelson Mandela.
Kube usuku lwentokozo nolwemibalabala kwabesifazane begqoke kahle behlobe ngezimbali kwingqephu yabo nokube enye indlela yokwamukela intwasahlobo. UNksz T. Lakhan nguyena obebambe loluhlelo, Abesifazane bebezijabulisa ngemidlalo ehlukahlukene, okubalwa kuyo umqhudelwano wokudansa, iseshini yokuvivinya umzimba ngendlela, kwaphinde kwaba neseshini yokuzindla maphakathi nezikhulumi zohlelo.
Umoya wothando ubuvunguza injabulo ngesikhathi izikhulumi zosuku zishiyelana inkundla. UMiss B. Makhoba ovela kuMnyango weziNdaba zangaPhandle (Home Affairs) ubekhona ezonika abesifazane okumele bakwazi ngaphambi kokuba babophe ifindo lomshado. UMakhoba ucebise ngokuthi abesifazane kufanele bangene emshadweni sebekulungele.
UMiss S. Nkosi ongumfundisi wokuzilolonga (Fitness Instructor) unike amathiphu okuhlala usesimeni sempilo ephilile futhi wanika nokuthi kungani kubalulekile ukuzivocavoca. UNksz Mnguni oyisazi sokusebenza kwengqondo (Psychologist), ukhulume ngezingqinambi abesifazane ababhekane nazo, uthe uma abesifazane bevumela ukuhlukunyezwa basuke benikela ngamandla abo.
UNksz M. Mdakane naye ukhulume ngokucekelana, nokubukelana phansi kwabesifazane bodwa. UMdakane uthe lokhu kwenzeka ngoba abantu besifazane bengafuna ukubona abanye besifazane benenqubekelo phambili kunabo. Uphinde wagqugquzela ukuba bafunde izincwadi ezibhalwe ngabanye besifazane base-Afrika ikakhulukazi abakuleli laseNingizimu Afrika.
Loluhlelo belungaphansi kwesiqubulo i- ‘Here’s to strong women, May we know them, May we be them, May we raise them.’
Omunye ongusomabhizinisi aphinde abeyisikhulumi esigqugquzelayo, uNksz T. Mathambo naye ubeyisikhulumi sosuku, ukhulume ngokubaluleka kokubukeka kowesifazane uma egqokile, wathi abantu bakuthatha ngendlela abakubona ugqoke ngayo.
UMphathi weKolishi uMnu. S.J Mlotshwa uthumele umlayezo ofisela bonke abesifazane inyanga enhle negcwele injabulo, wathi bayafisa beyikolishi ukuba abesifazane babo bazizwe bethandwa futhi bemukelekile.
Abafundi base Majuba TVET College baya eChina